Maraykanka, 30 June 2017
Khamiis 30 June 2017
Amarkii Socdaalka ee Trump oo Dhaqan-galay
Dowladda Mareykanka ayaa xalay Sideedii fiidnimo xilliga magaalada Washington, dhaqan-galisay sharci cusub oo dhinaca socdaalka ah kaasoo lagu soo rogay muwaadiniinta ka imaanaya dalalka Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen.
Dal ku Galka Mareykanka oo Lagu Adkeynayo Lix Dal
Dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay billowdo fulinta xeerar dadka kasoo jeeda lix dal oo muslim ah ee doonaya dal ku galka Mareykanka uga baahnaanaaya inay qaraabo dhow ama xiriir ganacsi kala dhaxeeyo Mareykanka, si loogu ogolaado inay dalka soo galaan.
Faahfaahin: Go'aankii Maxkamadda Sare ee Mareykanka
Maxkamada Sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u eegeyso kiiska amarki uu madaxweyne Donald Trump uga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta kasoo jeeda lix wadan oo ka mid ah dalalka Islaamka.
USA: Maxkamadda Sare oo Ogolaatay Qeyb Ka Mid ah Xayiraaddii Safar
Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah ogolaatay in qeyb xaddidan oo ka mid ah xayiraaddii socdaalka ee Madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka u dhashay lix waddan oo Muslim ah ay dhaqan galaan.
Minnesota: 78 Ruux oo uu Cudurka Jadeecada Soo Ritay
Illaa iyo hadda ku dhawaad 78 qof ayuu ku dhacay cudurka jadeecada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Madaxweyne Trump oo Baaritaan Lagu Sameynayo
Dambi baaraha gaarka ah ee baaraya saameyntii Ruushka ku lahaayeen doorashadii madaxweyne ee sanadkii tagay ka dhacday dalka Mareykanka, ayaa baaritaanka ballaariyey kuna daray inuu eego haddii madaxweynaha uu is-hortaag ku sameeyey caddaaladda.
Soomaalida Mareykanka oo ka Walaacsan Islaam Naceybka
Senate-ka oo Xoojinaya Cunaqabateynta Ruushka
Xubno ka tirsan Aqalka senate-ka Mareykanka ayaa Isniintii isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynada saaran dalka Ruushka.